Onye na-emepụta ihe na ngwaahịa na-ebubata Ahịa Wholesale | N'oge
Onye na-enye aka na mbuga ụgbọ mmiri Uru nke nnyefe Maka ndị ọchụnta ego na-achọsi ike, Dropshipping bụ ezigbo azụmaahịa azụmaahịa n'ihi na ọ dị mfe ịnweta. Na mbufe mbufe, ị nwere ike nwalee ngwa ngwa dị iche iche ...
Onye enyemaka mbupu
Uru nke nnyefe
Maka ndị ọchụnta ego na-achọsi ike, Dropshipping bụ ezigbo azụmaahịa azụmaahịa n'ihi na ọ dị mfe ịnweta. Na mbufe mbufe, inwere ike nwalee echiche di iche-iche di iche-iche n’ebughi oke agha, nke n’enye gi ohere imuta otutu ihe banyere otu esi ahota na ire ahia. E nwere ihe ndị ọzọ mere na izipụ ndị mmadụ ozugbo bụ ihe ewu ewu.
1. Obere ego achọrọ
Ikekwe uru kasịnụ nke ire ere bụ na ị nwere ike mepee ụlọ ahịa e-commerce na-enweghị itinye ego ọtụtụ puku dollar na ngwa ahịa. Na ọdịnala, ndị na-ere ahịa ga-emefu nnukwu ego iji zụta ngwa ahịa.
Na ụdị mbupu ụgbọ mmiri, ịkwesighi ịzụta ngwaahịa ahụ belụsọ ma ị rerela ma nataworị ụgwọ n'aka ndị ahịa. You nwere ike ịmalite ịzụta ngwaahịa ma bido azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma na obere ego na-enweghị nnukwu ego itinye ego n'ihu. Ọzọkwa, ebe ị na-ekweghị nkwa ịre site na ngwongwo ọ bụla a zụrụ tupu oge eruo dị ka ụlọ ahịa ọdịnala, enwere obere ohere ịmepe ụlọ ahịa.
2. Mfe iji
Mgbe ị naghị emetụta ngwaahịa anụ ahụ, ọ ga-adị mfe ịme azụmahịa azụmahịa e-commerce. Na mbupu ụgbọ mmiri, ị gaghị echegbu onwe gị:
Nchịkwa ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe ịkwụ ụgwọ
Mkpọ na ụgbọ mmiri gị iji
Sochie ngwa ahia maka ihe kpatara ya
Ijikwa nlọghachi na mbupu ụgbọ mmiri
Nọgide na-ịtụ ngwaahịa na jikwaa yiri nkata etoju ebipụta
3. Obere efe efe
Ebe ọ bụ na ị naghị emetụta ịzụ ngwaahịa ma ọ bụ ijikwa ụlọ nkwakọba ihe, ụgwọ ị na-akwụ ụgwọ dị oke ala. N'ezie, ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa na-aga nke ọma bụ azụmaahịa ụlọ, na-achọ naanị kọmpụta laptọọpụ na ụfọdụ mmefu arụmọrụ na-aga n'ihu. Ka ị na-etolite, ego ndị a nwere ike ịbawanye, mana ha ka dị obere ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa ọdịnala ọdịnala.
4. Mgbanwe ọnọdụ
Azụmahịa ahụ nwere ike ịgba ọsọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'thentanet. Ọ bụrụ n’ị nwere ike isoro ndị na - ebunye gị ahịa na ndị ahịa kwurịtara okwu, ị nwere ike ịgba ọsọ ma jikwaa azụmahịa gị
5. A dịgasị iche iche nke ngwaahịa ịhọrọ site na
Ebe ọ bụ na ịnweghị ịzụta ngwaahịa maka ọrịre tupu oge eruo, ị nwere ike ịnye ndị ahịa nwere ọtụtụ ngwaahịa ama ama. Ọ bụrụ na ndị na-ebubata ngwaahịa na-ebukọrọ ihe, ị nwere ike depụta ihe ndị a ga-ere na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na-akwụghị ụgwọ.
6. Mfe iji nwalee
Ahịa ahịa bụ ụzọ bara uru maka ndị nwe ụlọ ọrụ na-emepe ụlọ ahịa ọhụrụ ma chọọ ịnwale agụụ nke ndị ahịa ha maka ụdị ngwaahịa ndị ọzọ, dịka ngwa ma ọ bụ ahịrị ngwaahịa ọhụụ. N'otu aka ahụ, uru kachasị dị na mbupu ụgbọ mmiri bụ ikike ịdepụta na ire ngwaahịa tupu ịnye ịzụta nnukwu ngwongwo.
7. Mfe gbasaa
Maka azụmahịa azụmaahịa ọdịnala, ọ bụrụ na ị nweta okpukpu atọ karịa iwu, ị na-adịkarị mkpa ime ugboro atọ ọrụ ahụ. Site na iji ndị na-ebugharị mbupu ụgbọ mmiri, ọtụtụ ọrụ nke ịhazi iwu ndị ọzọ ga-ebu ngwaahịa site na ndị na-ebu ngwaahịa, na-enye gị ohere ịgbasa na obere nsogbu uto na obere ọrụ mgbakwunye.
Ọrịre ahịa ga-eweta ọrụ ọzọ mgbe niile, ọkachasị ọrụ metụtara nkwado ndị ahịa, mana e jiri ya tụnyere azụmaahịa e-commerce ọdịnala, azụmaahịa ndị na-eji ngwa ahịa ebunye ngwa ahịa dị mma.
Bido ahia ahia gi ugbua
Nke gara aga: Transportgbọ njem Oké Osimiri
Osote: Ọrụ bara uru
ugbo elu ugbo elu
DHL FedEX UPS gosipụtara ọrụ ụgbọ mmiri mba ...